Cabdikariin Guuleed: Waa gardarro cunaqabateynta la saaray Jubbaland - Awdinle Online
Cabdikariin Guuleed: Waa gardarro cunaqabateynta la saaray Jubbaland
Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda federaalka iyo Jubbaland.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu horreyn sheegay inuu Kimsaayo u tegay ka qeyb galka xafladda caleema saarka ee Madaxweyne Axmed Madoobe.
Sidoo kale waxaa uu gardarro cad ku tilmaamay cunaqabateynta dhinaca hawada ee la saaray dadka reer Jubbaland.
“Waxaa aad uga xunnahay munaasabada aan ku nimid, xilli shacabka reer jubbaland ay saaran tahay cunaqabateyn gardaro ah, shacabka reer Jubbaland ma qabato cunaqabateyn ma qabto dhibaatada gaarka ah ee lagu haayo, kama qabato dowladooda ayaga dhisteen, dadkii cunaqabateyntaas inay jebiyaan hormuudka u ahaa ayaa ka mid aheyn.”ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Ugu dambeyn wuxuu sheegay in loo baahan yahay isu tanaasul iyo in wax weliba lagu dhameeyo wada hadal, dowladana looga baahan yahay in ay iska deyso dhibaateynta dadka reer jubbaland.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo muddooyinkii dambe uu sii xoogeysanayey khilaafka dowladda dhexe iyo Jubbaland, kaas oo ka dhashay doorashadii Axmed Madoobe.
Previous articleSeeraar oo digniin u diray siyaasiyiinta Kismaayo iyo Jubbaland ku sii qulqulaya
Next articleCiidamada Djibouti ee Amisom oo dagaal kula wareegay xarumaha maamulka degmada Jalalaqsi